Eyona midlalo ilungileyo kwiVenkile ye App, ukhe wayizama yonke? | IPhone iindaba
Yeyiphi eyona midlalo ilungileyo kwiVenkile yeApple? KwiVenkile yeApple kukho imidlalo emininzi emikhulu Ngaba ukhe wayithandabuza? Ingxaki (esikelelweyo) yokuba nezinto ezininzi onokukhetha kuzo kukwazi ukuba zeziphi kwezi zinto ezizakusenza sonwabe ngaphandle kwengxaki. Uninzi lwezihloko ezilungileyo zinezinto ezintsonkothileyo zolawulo, kodwa zininzi ezinye, ngaphandle kokuphulukana nomgangatho, ezinolawulo olulula oluya kusivumela ukuba sonwabele umdlalo ukusuka kumzuzu woku-1.
Kuluhlu, oluthi nangona lubaliwe, lungabekwanga ngokomgangatho okanye ngokubaluleka, siza kukubonisa ukuba sikholelwa ntoni eyona midlalo ingama-25 ilungileyo kwiVenkile ye App ukusukela oko yavela ngo-2008. Kukho imidlalo yazo zonke iintlobo ezinokubakho, ke ngoko kukho izinto ezingaphezulu kwesinye ezinomdla kuwe.
Eyona midlalo ingama-25 ilungileyo kwiVenkile ye App
Ubungakanani obungapheliyo 2: I-sag infinity Blade yenye yezona zidumileyo kwimidlalo, ndingathi, ukulwa. Ukusukela umdlalo wokuqala, owafika ngo-2010, abasebenzisi abaninzi bayikhuphele imidlalo yayo emithathu. I-infinity Blade 3 yade yavela kwigama eliphambili lika-Apple apho iMetal ibonakalisiwe. Kwezi zintathu, sicinga ukuba eyona ilungileyo ngu-2.
Grand Theft Auto 3: Kuncinci kunokuthiwa malunga nesaga ye-GTA ongayaziyo. Olu luhlu lwemidlalo lusetyenziswe kwiiparodi, iimemes kunye nazo zonke iintlobo zokuhlekisa, ezibonisa udumo kunye nokubaluleka kwayo. I-GTA 3 yeyona ilungileyo kuthotho.
Umhlaba uphela nawe: Remix Solo: Ngaphantsi kweli gama sine-RPG eyayikhutshelwe iNintendo DS ekuqaleni. Kwabo bethu abadlale oomatshini abadala beArcade, Ihlabathi liphela kunye nawe lisikhumbuza loo midlalo ilwayo apho siqhubela phambili phakathi kweentshaba ezininzi, sihlandlo ngasinye sisomelele kwaye sinamanani amakhulu. Ukongeza koku sele kukhankanyiwe, esi sihloko sidityaniswa ziimpawu zayo nayiphi na i-RPG. Iyacetyiswa ngokupheleleyo.
Ukuhamba Abafileyo: Umdlalo: Ukuba ndithetha ngempumelelo yothotho lokuhamba kwabafileyo, andifumani nto intsha. Olu luhlu, olusekwe kwikomikhi enegama elifanayo, lisibonisa amava eqela labantu abazama ukuhlala kwilizwe le-zombie post-apocalyptic. Kumdlalo esiya kuwudlala njengo-Lee Everett, isaphuli-mthetho esigwetyelweyo esiza kuphila phakathi kwabantu abaninzi abangafundanga kwiziqendu ezithandathu ezahlukeneyo. Ngaba uza kuyiphosa?
Bastion: Ukuba uthanda ii-RPGs, awungekhe uyeke ukudlala iBastion. Hayi lilize, yayikhethwe njengenye yezonaapps zibalaseleyo kwiVenkile ye App ngo-2012. Ndingathi ifana nje ne RPG yezikrini zokuchukumisa. Kuncinci endinokukutsho.
Iibhidi ezinomsindo: Akukho mntu waziyo ukucaphuka kweentaka? Ubuphi? Idalwe ngo-2009 nguRovio, eli qela leentaka ezilwa iihagu eziluhlaza ezibe amaqanda abo ziye zaphumelela kangangokuba baye bashiya izikrini ze-iPhone yethu, i-iPod kunye ne-iPad bazenzela eyabo intengiso. Nangona engoyena ubalaseleyo kwimizobo, ii-Angry Birds zokuqala zezakhe eziqale ngayo yiyo loo nto kufanelekile ukuba abe kolu luhlu.
Limbo: Ndiphi? Kwenzekani? Ngaphantsi kwesi sihloko esizimeleyo siya kulawula umntwana kwihlabathi elimnyama ngaphandle kwengoma. Kuya kufuneka simthabathe kweyona ngozi imangalisayo esinokuyicinga, njengesigcawu esikhulu esiya kusisukela de sigqibe ngaso. Kodwa siyaphi? Sifanele ukuba seLimbo kwaye kufuneka sifumane umhlobo / udadewethu okanye nantoni na le ntombazana… ukuqala kwakhona… Asimangalisi ukuba ithathwa njengeyona midlalo ibalaseleyo kwiVenkile ye App.
URayman Jungle RunOlu luhlu alunakuphuthelwa naziphi na ii-endles ezibalekayo. KwiRayman Jungle Run kuya kufuneka sibaleke (ngasekunene) njengakuwo nawuphi na umdlalo wolu hlobo, kodwa kwihlabathi likaRayman, elenza libe yinto ekhethekileyo.
Amaphiko amancinci: mininzi imidlalo efanayo kwiVenkile ye App, kodwa amaphiko amancinanana ngowokuqala kubo kwaye kufanelekile ukuba kuluhlu lweyona midlalo ilungileyo kwiVenkile ye App. Kule mdlalo kuya kufuneka silawule ukubhabha kunye nokuwa kwentaka ukuze sihambe ngokukhawuleza kwaye sifike kangangoko kunokwenzeka. Kufana nokubaleka okungapheliyo, kodwa kudidi olwahlukileyo.
Iqhamo Ninja: Omnye wemidlalo ongadingi kwaziswa. Umdlalo apho kuya kufuneka sityibilikise iminwe yethu ukusika isiqhamo kweyona combos inkulu inokwenzeka. Zininzi iividiyo ezikwi-youtube apho iikati zidlala iFruit Ninja, iividiyo ezihlekisayo njengomdlalo ngokwawo.
Jetpack Joyride: isihloko sodumo olukhulu apho kuya kufuneka sifike kude ngokubaleka ngasekunene. IJetpack Joyride yinto engapheliyo apho siza kuthi silawule umlinganiswa obaleka kumzi-mveliso exhobile ngohlobo lompu owenza ukuba abhabhe. Kukho iitoni zentshukumo ekhethekileyo, ke ulonwabo luqinisekisiwe.
I-Scribblenauts Remix: Ngaphantsi kwesi sihloko sinomdlalo we-adventure-adventure owenzelwe ekuqaleni iNintendo 3DS. Kuya kufuneka simlawule uMaxwell endleleni yakhe yokuqokelela iiStarites.
Max Payne IselfowuniInguqulelo ephathekayo kaMax Payne yinguqulelo efanelekileyo eyenza ukuba ikolu luhlu lweyona midlalo ilungileyo kwiApp App. Umdlalo wokudubula, kodwa hayi emntwini wokuqala, ene-backstory elungileyo.
Izityalo kunye namaZombiNangona icandelo lesibini sele likho, umdlalo wokuqala awukho ngaphandle komgangatho. Ukongeza, ayibandakanyi ukuthenga oku-ngaphakathi okucaphukisayo, oko kuthetha ukuba singasonwabela isihloko esikhulu ngaphandle kokuma okanye ukuhlawula. Ayinakho ukongezwa kwenxalenye yesibini, kodwa ayifuni nayo.
Isiphithiphithi Imisesane II: Ukuba uyithandile iFantasy yokuGqibela yoqobo kwaye ujonge into efana naleyo yemizobo yanamhlanje entendeni yesandla sakho, mhlawumbi olona khetho lulungileyo yiChaos Rings II. Asingomdlalo wexabiso eliphantsi, kodwa ngokuqinisekileyo ufanelekile kuyo yonke i-euro.
IGTA: IiNtshonalanga zaseChina-Isihloko sesibini koluhlu lwe-GTA kolu luhlu kwaye kungenxa yokuba kufanelekile. Kuncinci okunokuthiwa ngaye ngaphandle kokuba "uyidlale kwaye uya kufumanisa."
NOVA 3: phantsi kwegama le-Near Orbyt Vanguard Alliance 3 sinomnye wemidlalo yokuqala yomntu wokuqala kwiVenkile yeApple, kodwa ngamagunya athile akhethekileyo enza umdlalo ungabi lolunye nje kuphela. Ndinayo oko yaphuma kwaye kufanelekile.
Inqaba encinci: Yaziswa ngo-2011, kwi-Tiny Tower kuyakufuneka sizakhele eyethu isakhiwo ngokulinganisa ishishini lokwakha. Eyona nto imnandi ngakumbi kunokuba ivakala. Eyona nto intle kukuba uyizame, kuba ngeli xesha lokubhalwa, yayisimahla (iya kuba yinto engaqhelekanga, kodwa inokutshintsha).
Timberman: Ukuba asikwazi ukubeka i-Flappy Bird kolu luhlu kuba umphuhlisi wayo uyisusile kwiVenkile ye App, sibeka iTimberman, umdlalo okhangeleka ngathi yi-bullshit kwiilensi zayo kunye nemizobo, kodwa oko kudala umlutha omkhulu kwaye esinokuthi sicele umngeni kuwo abahlobo.
Umwephuli omangalisayo: Xa sidlala kwizikrini zokuchukumisa, kubaluleke kakhulu ukuba ulawulo lube lula. Kodwa ukuba isenzo silula kakhulu, umdlalo awuyi kulunga. Kwi-Amazing Breaker kuya kufuneka silahle uthotho lweebhombu ukutshabalalisa umfanekiso ophambi kwethu. Ndiyayithanda kakhulu kwaye yiyo loo nto ndibeke kolu luhlu.
Iimfazwe zeJometri 3: kum yeyona ilungileyo. Luhlobo lomxube phakathi komntu wesithathu umdlalo wokudubula kunye nomdlalo weenqanawa, zonke zinomfanekiso wehlabathi ledijithali kunye nezandi ezinomtsalane. Ukuba ndingacebisa enye kolu luhlu, ndingacebisa lo mdlalo.
Swordigo: phantsi kwesi sihloko sinomdlalo weqonga "olula". Yintoni engalunganga ngezi ntlobo zemidlalo? Ewe, ndiyabathanda kwaye bandikhumbuza imidlalo yeekhonsoli ezindala. I-Swordigo indinike amaxesha amnandi kwaye yenye yezimbalwa endigqithileyo kuzo.
Real Racing 2Umdlalo weemoto awunakuphuthelwa kolu luhlu. I-RR2 ngumdlalo apho kuya kufuneka sibale ukhuphiswano olwahlukileyo ngeemoto ezahlukeneyo kwaye siphucule ngokuhamba kwexesha. Kum kungcono kakhulu kune-RR3 yokungabi nazinto zithengiweyo ngokudibeneyo, esivumela ukuba sidlale ngaphandle kokuma okanye ukuhlawula xa umdlalo ufuna. Ukongeza, iyinyani, ngokungafaniyo nezinye i-sagas ezifana ne-Asphalt, ethi nangona iyinyani ukuba zilungile kakhulu ... azisasebenzi ngokwenyani.
Sika intambo: Uvavanyo: Ubungayazi le bug iluhlaza itya ilekese? Kulungile kufuneka. Injongo yethu kukunika isilwanyana sethu ilekese kwinqanaba ngalinye, ekuya kufuneka sisike imitya ngalo mzuzu ungqalileyo, kunye nokwenza ukuba kube neendlela ezahlukeneyo zokukufezekisa. Lumka, ukuba asiyifumani, isilwanyana sethu siyadana.
I-PAC-MAN 256: Kwaye okokugqibela kodwa kungaphelelanga apho, inkulungwane ye-XXI uPacman. I-PAC-MAN 256 yinguqulelo yomdlalo wasentsomini apho kuya kusoloko kufuneka siqhubele phambili okanye, ngapha koko, ukungabikho kuya kusigubungela. Kwakhona, sinamagunya ahlukeneyo aya kusivumela ukuba sibulale iziporho ngeendlela ezahlukeneyo. Into elungileyo kukuba isimahla. Into embi kukuba asizokwazi ukudlala ngamagunya ukuba asilindi / asihlawuli emva kwemidlalo emi-6.
Ucinga ntoni nge Eyona midlalo ilungileyo kwiVenkile ye App? Nguwuphi umdlalo owuthandayo kwiVenkile ye App? Ngaba ikuluhlu?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iapps zokusebenza » IPhone imidlalo » Eyona midlalo ilungileyo kwiVenkile ye App
Inombolo 13, giochi, ngaba giochi & rompicapo?
Yesu, ndilipele igama lenombolo 13. Umdlalo ikhonkco elibhekisa kuwo yiHook Champ. Enkosi ngesilumkiso. Umbuliso!
IGN isuka e-US kwaye iseSan Francisco ayiveli e-UK…. Kucetyiswa i-100%
Imidlalo elungileyo kakhulu, ngokobuqu ndiyayithanda kakhulu i-Asphalt 5
Umbuzo omnye: YINTONI umdlalo ekubanjwayo? (Lowo unesithuthuthu)
Kwaye utsibe i-Doodle? 🙁
@beto, vula iphepha kwaye uthi UK 😉
Nguwuphi umdlalo isithuthuthu emfanekisweni? = (= (= (= (= (= (= (= (= (=
UJoseph !! sitsho
kunye ne-TAP TAP ?? okanye isixeko sim? 🙁 OSMOS andazi ukuba yintoni malunga .. hehe
Phendula uJoseph !!
Kum, enye yezo ndingenakukuphosa yi-Bejeweled 2
Kwaye ngomzuzu omnye we-BLITZ ilungile ngelixa likulayini okanye kwigumbi lokulinda.
Kwaye iziqhamo ninja ???????
Inqaku elilungileyo, ndiyavuyisana nani!
Andiluthandi olu luhlu konke konke, kukho imidlalo ebhetele kwaye eyonwabisa ngakumbi kunale. X ubuncinci ngokwembono yam kunjalo.
Kube lixesha elide ndibona uluhlu olunosizi ngolu hlobo ... ukuba ujonge uluhlu lokuthatha isigqibo malunga nomdlalo oza kuwuthenga, ayisiyiyo le xD
mnumzana flo sitsho
Molweni imidlalo elungileyo kodwa ukuba niyazithanda iintaka ezinomsindo ndicebisa iilori kunye neekhakhayi isiseko somdlalo siyafana kodwa ngeelori ndiyayithanda ndiyathemba niyayithanda
Phendula ku-mister flo
eyokuqala imbi kakhulu xd ke ukungcakaza crap
Ndiyithanda kakhulu i-hiway zombie (UKUQINISWA)
enye yeyona midlalo ilungileyo iphi amanzi am (aphi amanzi am, ngeSpanish). Ndiyincoma 🙂
UJose santana sitsho
Kum owona mdlalo ungcono kwaye ungabizi kakhulu sisiphumo sobunzima 3, kubiza kuphela iisenti ezingama-89 kwaye kuyonwabisa kakhulu ngemizobo kunye nesenzo esingenakoyiswa !!!
Phendula kuJose Santana
Le midlalo ayilunganga, mininzi, ingcono kunayo yonke le
Kwaye ndiphinde ndilahle i-jetpack, iziqhamo ze-ninja kunye ne-trigger efileyo
Oku akulunganga, owona mdlalo ubalaseleyo kwi-App yi-MINECRAFT. Ubusazi !!!!!!!
Ha ha kunye nee-boos 2
Kwakhona ISUBWAY SURFERS
Awungekhe ubaphose abo baphuma kwi-supercell (ukungqubana kwezindlu, ulwandle lwe-boom, usuku lwe-hay)
UDavid Cuadrado Fernandez sitsho
I-Leo fortune okanye umhlaba weGoo wezona zilungileyo
Phendula kuDavid Cuadrado Fernandez
U-Leo Fortuny okanye ilizwe le-Goo eliyimfuneko
Ushiye isaga ebalulekileyo Igumbi. Umzobo omangalisayo. Iyacetyiswa kwaye ininzi yonke i-saga
UMLILO SIMAHLA OWONA BONAKALA
Iibhola zohlobo lwebhola
I-DRK | uLuntu oluNgekhoyo sitsho
Khange bawubeke uMlilo wasimahla kwaye une-10 yezigidi okanye ukhuphelo. Yonke imidlalo imbi. Ababini banomdla kum nje: iimfazwe zejometri 3 kunye nomdyarho wokwenyani 2 (sele ndiyidlala hahaha).
Phendula kwi-DRK | uLuntu oluNgekho mthethweni
I-TestFlight yandisa inani labavavanyi be-beta ukuya kubasebenzisi abangama-10.000